Kuderedza Kupa Kwezvinhu Mutengo muAerospace neDziviriro Indasitiri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Kuderedza Kupa Kwezvinhu Mutengo muAerospace neDziviriro Indasitiri
Guestpost • Waya Nhau Services
8 min kuverenga
Aerospace uye Dziviriro (A&D) macheni emaketeni ari kutarisana nemwaka wakaomesesa.
Iyo COVID-19 denda yakaunza iyo yose indasitiri yendege kumabvi, ichisiya vagadziri nevatengesi zvakafanana vachikwikwidza kudzokera kune zvakajairika zvigadzirwa mazinga.
Hurumende, mukupindura hupfumi hwakaremara, vadzikisira mari yavo paA & D pazvombo zvemauto.
Mabhizimusi akazvimirira, mukufamba kwakafanana, akadzora mari pazvinhu zvemuchadenga.
Maitiro aya asiya mafemu mazhinji asina akavimbika Aerospace cheni yekudyidzana naye kuzununguka. Asi haisi iyo chete yekutengesa yeA & D iri kutambura. Vatungamiriri veBiden vachangobva kuitisa kuongororwa kwemazuva zana yeakakomba ekupa cheni. Zvakawanikwa zvakaratidza kushomeka kwakasiyana siyana muindasitiri yekutengesa zvinhu.
United States yadonha kubva ku37 muzana yezvigadzirwa zvepasi rese semiconductor kusvika gumi muzana muzana yemakore makumi maviri apfuura. United States parizvino inogadzira chete 12 kusvika 20 muzana yemazita echikuru akura, tekinoroji yepamusoro semiconductor. Sekureva kwemutungamiriri wenyika, iyi yakaderera muzana "inotyisidzira zvikamu zvese zvema semiconductor kupa cheni pamwe nekukwikwidza kwedu kwenguva refu kwehupfumi."
Kuderera kwemitengo kwaita kuti manejimendi eBiden azivise bhizimusi re "ratidziro," rinotungamirwa neMumiriri weU.S. Wekutengeserana Katherine Tai, iro "richakurudzira kuita kweanotsigira nyika nevemarudzi akawanda kurwisa nzira dzekutengesa dzisina kukodzera dzakakanganisa zvisungo zvakakura zvekupa."
Sezvo vese hurumende nevatengesi vane chekuita vanofunga nezvenzira isingadhuri yekugutsa zvido zvavo zveaerospace, vagadziri veA & D vanofanirwa kudzikisa mutengo kuti vawane madhiri uye vachengetedze migumo yemubhadharo.
Heano mamwe matanho ekubatsira madiki uye epakati-saizi avhiyesheni Vagadziri vanogona kukanganisa optimization yecheni kudzikisa mitengo:
1. Digitize cheni yekupa
A classical supply chain modhi inoshanda zvine mutsetse, uye vagadziri vemitemo vanowanzove nemaonero akatetepa ezvese zvekutengesa cheni, zvichitungamira kune zvingangoita lags uye kuwedzerwa kwemari.
Iyo yakapihwa digitized cheni yekutengesa, zvisinei, inopa kunyatso tarisa yekutenga cheni yekujekesa zvirinani, kudyidzana, kuchinjika, uye nekukurumidza mhinduro. Zvichitaurwa zviri nyore, digitization inoshandisa data kugadzirisa mashandisiro emaketani.
Iko kusanganisa kwedata mune yese cheni yekutengesa kunobatsira mukugadzirisa kwecheni yekutengesa nekuronga uye nekumisikidza kwekupedzisira kwekuuya kwezvinhu zvekushomeka kwevanhu kushomeka.
Semuenzaniso, mapurogiramu anotora masheya, masisitimu ekuongorora, agile kugadzira, ungwaru hwekugadzira, uye mimwe michina inozvidzora-wega inogona kuverengerwa muchimiro checheni yekutengesa kune inokurumidza uye inochinja mamiriro.
Kuti uwane digitization yecheni yako yekutengesa, ungangoda kushamwaridzana nekambani yepasirese cheni manejimendi kambani. Pane zvakawanda zvingasarudzwa muUS. Iri gwaro rinonyora iyo akanakisa epasirese ekuwanisa cheni manejimendi makambani izvo zvinoshanda munzvimbo yekumhara uye yekudzivirira.
2. Shandisa Zvinodhura Zvishandiso
Kunzwisisa mutengesi mari uye zvitengeswa zvemitengo zvinobatsira Aerospace uye Vagadziri veDziviriro kuwana mitengo inonzwisisika yemirairo yavo. Vazhinji vagadziri vanofungidzira kuti mutengo wemutengesi wakagadziriswa. Nekudaro, imwe mari inogona kushandurwa kana mugadziri aine ruzivo rwakakodzera. Kuongorora kwekubhadhara mitengo inzira yekuenda.
Maererano neU.S. Federal Kuwana Mutemo (FAR) 15.407-4, ongororo yemitengo inofungidzirwa inofanirwa kuongorora "hupfumi nekushanda kwevashandi vekontrakta varipo, nzira, zvishandiso, zvishandiso, chivakwa, mashandiro, uye manejimendi."
Tinokurudzira maviri mamodheru ekuona yakaringana mitengo yemitengo:
Inofanira-mutengo Muenzaniso: Mune ino modhi, kontrakta anoshandisa mitengo yemusika uye mutengo wezvehupfumi kuona kukosha kwechigadzirwa. Iyi modhi haifunge nezvevanopa vanobvunza mutengo asi kuti voona kuti chigadzirwa chinodhura zvakadii zvichibva pazvinhu zvakaita semidziyo, zvigadzirwa zvepamusoro, basa, uye inflation.
Kuyerera-pasi Kuongorora: Kuongorora kwekudonhedza-pasi kunoputsa chigadzirwa muzvidiki zvidiki kutsanangura pragmatic mutengo kana kukosha kwenzvimbo yega yega zvinoenderana nekushanda kwayo. Kunze kwekugadzirwa kwemaindasitiri, chishandiso ichi chinoongorora hunyanzvi, kuomarara, kugadzirwa, kuvimbika, chengetedzo, nezvimwe zvinoshandiswa.
Dzidza zvakawanda nezve kushandisa zvishandiso zvinodhura munyaya ino.
3. Rondedzero uye Zvishandiso
Masangano anofanirwa zvakare kuburitsa mamodheru ekuongorora uye maturu evatungamiriri ekushandisa vasati vatenga. Matsamba akadaro anotaridza mazano akadai sekuti mugadziri ane chinhu chinoenderana nebhajeti asi anogona kuita basa rimwe chete.
Iwo maturusi anogona kunge ari mairafu uye mapepa ekushandira anobatsira director kuti akurumidze kugadzira muyero wekuita, juxtapose mutengo wevamiriri nevamwe vatengesi, uye ongorora maitiro emusika.
Vatungamiriri vanofanirwa kuve nemaonero akajeka ezvinodiwa zvisinei nekuti mutengesi anoda huwandu hwehuwandu hweodha. Chinangwa hachifanirwe kunge chiri chekungodzivirira kupedzisa chinhu asi zvakare kudzikisa kuverenga.
4. Kutaurirana zvinobudirira neVatengi
zhinji Aerospace uye Kudzivirirwa makambani anotenda kuti haana mari yakakwana yekugonesa vatengesi vavo kuti vadzikise mitengo, kunyanya vatengesi vakadzika midzi vakabatana nezvirongwa zvikuru.
Aya makambani anonyanya kurega mutambo usati watanga. Kunyangwe hazvo kutaurirana kusiri kufamba mupaki, kune dzimwe nzira shoma dzinogona kushandiswa nemakambani eAerospace neDziviriro kukwidziridza mutengo.
Sarudza inodzivirirwa chinangwa chemutengo
Vazhinji vagadziri vanowanzove neiyo diki intuition nezve iyo yekutanga element economics yechinhu kubva kune wakapihwa mutengesi. Nekudaro, nhanho yekutanga ndeyekuuya neiyo chaiyo tarisiro kukosha kune izvo zvinofanirwa kudhura. Makambani anogona kushandisa nzira dzinoverengeka kuti zviite izvi.
Makambani anotarisa kuti mutengesi anodhura sei kune imwe nharaunda anodzikisira pasi mutengo wemutero munzira yepamusoro-pasi. Kune zvigadzirwa zvakaomesesa, chigadzirwa chekutanga chakapedzwa kubva pamutsetse wegungano chinodhura zvakanyanya kupfuura zana, izvo zvinobva zvadhura zvakanyanya kupfuura chiuru.
Chiyero chekuderera kweiyo yakazara system mutengo ihwo hukama hwakaenzana pakati pehuwandu hwekugadzira huwandu hwekambani uye mutengo wekugadzira. Zvichipa huwandu hweyuniti, mhando yegungano inodiwa, uye mutengo wekutanga wekutanga, iyo curve yemutengo inoratidza izvo mutengesi wepamusoro-soro anofanira kunge achikumbira mushure mehuwandu chaihwo.
Pane nzira dzakasiyana siyana dzepazasi-kumusoro dzekumisikidza tarisiro mutengo. Maitiro echigadzirwa chinosanganisira kutarisa kune zvidiki-zvidimbu zvechikamu chakapihwa chemuchina. Izvo zvinowanzo kuwanikwa pamusika wepachena, uye makambani anogona kuona kukosha kwakaringana kune yega yega, pamwe nemari dzevashandi kuti vazviise pamwechete.
Makambani anokwanisa zvakare kutarisa pamutengo wezvikamu zvakafanana nezvinoenderana. Hapana imwe yemaitiro aya ndeyekupusa-chiratidzo, asi nekushandisa dzese, makambani anogona kusimudzira huwandu hweiyo chaiyo mutengo wekutenga wechinhu chaicho chinhu. Izvo zvinovapa zvakavimbika uye zvinogona kuyerwa zvikonzero zvekutaurirana nemutengesi kudzikisa mutengo.
Gadzira zvirevo zvekuwedzera pamwe nemutengesi
Imwe nzira yekutaurirana zvinobudirira nevatengesi ndeyekubata nzvimbo dzinogona kuitika dzekusimudzira. Muzviitiko zvakawanda, makambani anokwanisa kuwana mukana wakawanda kupfuura zvavanofunga nekushandisa dhata iripo mune dzimwe nzvimbo. Kutanga, zvakadaro, Vemidziyo Yekutanga Vagadziri (maOEMs) vanofanirwa kunzwisisa kuti vatengesi vanoita sei purofiti yavo uye kuti iyo mibairo inoda kuwedzera kwenguva yakati.
Semuenzaniso, vamwe vatengesi vanoita mari yavo zhinji vachitengesa kumaOEMs sechikamu chechibvumirano chepakutanga chehurongwa. Vamwe vanoita zvakawanda nekutengesa zvakananga kuhurumende kungave pasi rose kana kuhurumende yavo.
Zvakare, vamwe vanosimbisa mhedzisiro yekutengesa kwezvipenga zvemuchina unopera nekufamba kwenguva. Nekubata chirongwa chekambani yemutengesi, kambani inogona kuona kuti ndeipi nzira yekutaurirana nemutengesi kuti ivake mukana panguva yekutaurirana.
Zuva reWorld Tourism neGoogle
Turkmenistan inovhura nzvimbo yayo yemhepo kuAfghanistan ...
Aimbova Israel PM Netanyahu ane zvakavanzika ajenda mu ...
Seychelles Gurukota rezveKushanya Inoshevedza paDMCs
Tourism Seychelles neClub Med Inosimudzira Kwayo ...
Sebastian Samuel anoti:
Gunyana 6, 2021 pa 10: 25
For example, some suppliers make most of their money selling to OEMs as part of the original contract for a system. Others make more by selling directly to the governments either globally or to their government. Thanks for this information sharing.